अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०५:४६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज बिहान मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको नेतृत्व गरिरहेको प्राडा प्रेम ज्ञवलीका अनुसार आज बिहान ९ बजेदेखि प्रत्यारोपणको प्रक्रिया शुरु हुने बताएको छ । आज मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीका लागि उहाँको प्रि ट्रान्सप्लान्ट डायलाइसिस र अन्य स्वास्थ्य परीक्षण मंगलबार नै सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार नेपाली चिकित्सक र नेपालकै अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि डा. ज्ञवालीको नेतृत्वमा ६ जना सर्जन, २ जना एनेस्थेसिस्ट, ८ जना नर्सिङ स्टाफसहित करिब ३० जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिने तयारी भइसकेका छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सरकारले भारतबाट दुईजना चिकित्सक समेत बोलाएको डा. ज्ञवालीले बताए ।
चलचित्र ‘नीरफूल’ को ट्रेलर सार्वजनिक ( भिडियो )